Khayre: kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa in aad noqon doontaan kuwo sharaftii iyo kala dambeyntii Qaranka soo celiya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Khayre: kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa in aad noqon doontaan kuwo sharaftii...
Khayre: kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa in aad noqon doontaan kuwo sharaftii iyo kala dambeyntii Qaranka soo celiya
Ra’iisul Wasaaraha oo khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka ee gacanta ay ku hayso dawladda Imaaraadku, ayaa ciidamada ugu hambalyeeyey sida wanaagsan ee ay ugu diyaar garoobeen xoreynta dalka. Waxuuna u sheegay in looga fadhiyo door lixaad leh iney ka qaataan dagaalka Al-Shabaab.
“Ciidamadani waxay tusaale u yihiin sida ay nooga go’an tahay in aan dalka ka xoreyno kooxaha argagixisada ah, kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa in aad noqon doontaan kuwo sharaftii iyo kala dambeyntii qaranka Soomaaliyeed soo celiya. Waxaa la idin kaga fadhiyaa inaad door lixaad leh ka qaadataan ciribtirka Al Shabaab”Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre oo u mahadceliyey dawladda Imaaraadka ee gacanta ku haysay ciidamadani.
Previous articleSharciga Maaraynta Maaliyadda oo la hor geeyay Baarlamaanka (Sawiro)
Next articleAkhriso:Duubadka Qaranka oo war kasoo saaray xaaladda Ammaan ee Soomaaliya